ယူနိုကျတကျကိုပဈပယျကွပွီလား? (သို့) ယူနိုကျတကျကိုပှဲပွီးအောငျမကွညျ့သူမြားနဲ့ ယူနိုကျတကျအင်ျကြီမဝတျခငျြသူမြား
မနကေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ဘနျလပှေဲမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာအိမျကှငျးမှာပဲ နှဈဂိုး၊ဂိုးမရှိနဲ့ ဘနျလကေိုရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့အတှကျ အရေးပါခြိနျမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဒီရာသီမှာ ၈ ပှဲမွောကျရှုံးပှဲနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျတို့အိမျကှငျးမှာတောငျ ပုံစံကောငျးမပွသနိုငျခဲ့လို့ ပရိသတျတှကေတော့ အကွီးအကယျြကို စိတျဆိုးဒေါသထှကျနကွေပါတယျ။ အဓိကတိုကျစဈမှူးရကျရျှဖို့ဒျ တဈယောကျဒဏျရာကွောငျ့ မပါဝငျနိုငျခဲ့ကာ၊ ယူနိုကျတကျအသငျးတိုကျစဈပိုငျးက အားနညျးခဲ့သလို ခံစဈပိုငျးကလညျး မပေးသငျ့တဲ့ဂိုးတှကေို ခှငျ့ပွုခဲ့ရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျဘကျကို ခရစ်စဝုဒျနဲ့၊ ဂရြေိုဒရီဂှကျဇျတို့က ဂိုးတှသှေငျးခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျပှဲကိုအဆုံးထိမကွညျ့ခငျြသူတှရှေိသလို၊ ယူနိုကျတကျအင်ျကြီကို မဝတျခငျြတော့တဲ့သူတှေ လညျးရှိလာမယျ ဆိုတဲ့သတငျးလညျးကွားရပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စကိုပွောဆိုသူကတော့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဟောငျး ဖာဒီနနျဖွဈပါတယျ။ “မိနဈ 80 ကြျောကြျောလောကျ မှာပရိတျသတျတှထေပွနျကုနျကွ တာကို ကြှနျတျောတှနေ့ရေပါတယျ။လကျကနျြမိနဈမှာ ယူနိုကျတကျကတော့ပွနျမလာနိုငျတော့ဘူးဆိုတဲ့ မကျြနှာထားမြိုးတှနေဲ့ ထပွနျကွတယျဆိုတာ ဒီအသငျးမှာမရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပရိတျသတျတှထေပွနျကွတာ ကိုမွငျရတာအလှနျရှကျဖို့ကောငျးပါတယျ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ကြှနျတျောဒီမှာထိုငျနရေတာ ရှကျပါတယျ။ နောကျဘာဖွဈလာမလဲဆိုတာမပွောတတျတော့ဘူး။ အသငျးရဲ့ပဈမှတျကိုလညျးမမွငျဘူး။ အနာဂတျလမျးကွောငျးကိုလညျး မမွငျဘူးဖွဈနတေယျ။”ဆိုပွီး ဖာဒီနနျက BT Sport စကားဝိုငျးမှာပွောဆိုခဲ့ ပါတယျ။
“ယူနိုကျတကျရဲ့အခုလိုအဖွဈအပကျြတှကေိုကွညျ့ပွီး၊ အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာကြောငျးတကျ စာသငျတဲ့ ကလေးလေးတှကေယူနိုကျတကျအသငျးအင်ျကြီကိုငါတဈခြိနျမှာဝတျမယျဆိုတာမြိုးဖွဈလာတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ပွီးတော့အဲဒီလူငယျလေးတှကေ ယူနိုကျတကျအသငျးကိုလညျးကှငျးထဲမှာလာအားပေးမယျ့ ပရိတျသတျတှအေဖွဈကိုရောကျရှိလာတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။”ဆိုပွီး ဖာဒီနနျကမှတျခကျြပွုပွောဆိုပါတယျ။
နညျးပွဆိုးလျရှားတဈယောကျ အသငျးမှာဒဏျရာပွသနာတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေခြိနျ၊ အသငျးကိုအကောငျးဆုံးဖွဈ အောငျ မတညျဆောကျနိုငျတဲ့အခြိနျ၊ကောငျးမှနျတဲ့နညျးဗြူဟာအပွောငျးအလဲတှေ၊ အနာဂတျအတှကျ ထငျရှားတဲ့ လမျးကွောငျးတှမေခငျးကငျြးနိုငျတဲ့အခြိနျမှာ ဘနျလအေသငျးကတော့ ကံကောငျးပွီး လကျစတာ စီးတီး နဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး တို့ကို နှဈပှဲဆကျ အနိုငျ ယူနိုငျသှားခဲ့ပါပွီ။ ယူနိုကျတကျရဲ့မှုနျပွာမှိုငျးဝတေဲ့ အနာဂတျ အခွအေနဘေယျလိုဖွဈလာမလဲဆိုတာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ကွရအောငျပါ။
ယူနိုက်တက်ကိုပစ်ပယ်ကြပြီလား? (သို့) ယူနိုက်တက်ကိုပွဲပြီးအောင်မကြည့်သူများနဲ့ ယူနိုက်တက်အင်္ကျီမ၀တ်ချင်သူများ
မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ဘန်လေပွဲမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာအိမ်ကွင်းမှာပဲ နှစ်ဂိုး၊ဂိုးမရှိနဲ့ ဘန်လေကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် အရေးပါချိန်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီရာသီမှာ ၈ ပွဲမြောက်ရှုံးပွဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့အ်ိမ်ကွင်းမှာတောင် ပုံစံကောင်းမပြသနိုင်ခဲ့လို့ ပရိသတ်တွေကတော့ အကြီးအကျယ်ကို စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။ အဓိကတိုက်စစ်မှူးရက်ရ်ှဖို့ဒ် တစ်ယောက်ဒဏ်ရာကြောင့် မပါဝင်နိုင်ခဲ့ကာ၊ ယူနိုက်တက်အသင်းတိုက်စစ်ပိုင်းက အားနည်းခဲ့သလို ခံစစ်ပိုင်းကလည်း မပေးသင့်တဲ့ဂိုးတွေကို ခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဘက်ကို ခရစ္စ၀ုဒ်နဲ့၊ ဂျေရိုဒရီဂွက်ဇ်တို့က ဂိုးတွေသွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်တို့အိမ်ကွင်းမှာတောင် မျက်နှာပျက်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြတာကြောင့် အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေဟာ ပွဲမပြီးခင်မှာပဲ ကွင်းအတွင်းကနေ ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ ကစားချိန် 10 မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ကျန်သေးပေမယ့်လည်း ယူနိုက်တက်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစိတ်ပျက်လာကြပြီး၊ မယုံကြည်တော့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေဟာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ကွင်းထဲက ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ နည်းပြဆိုးလ်ရှားအတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာပြီး အခန့်မသင့်ရင် အသင်းကထွက်ခွာရကိန်းရှိနေပါတယ်။ ဒီရှုံးပွဲကြောင့် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ချယ်လ်ဆီးအောက် ခြောက်မှတ်အကွာမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေရပြီး စပါးနဲ့ဝုလ်ဗ်အသင်းတို့နဲ့ ရမှတ်တူနေပြီဖြစ် ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ပွဲကိုအဆုံးထိမကြည့်ချင်သူတွေရှိသလို၊ ယူနိုက်တက်အင်္ကျီကို မ၀တ်ချင်တော့တဲ့သူတွေ လည်းရှိလာမယ် ဆိုတဲ့သတင်းလည်းကြားရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကိုပြောဆိုသူကတော့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ဖာဒီနန်ဖြစ်ပါတယ်။ “မိနစ် 80 ကျော်ကျော်လောက် မှာပရိတ်သတ်တွေထပြန်ကုန်ကြ တာကို ကျွန်တော်တွေ့နေ ရပါတယ်။လက်ကျန်မိနစ်မှာ ယူနိုက်တက်ကတော့ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ မျက်နှာထားမျိုးတွေနဲ့ ထပြန်ကြတယ် ဆိုတာ ဒီအသင်းမှာမရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပရိတ်သတ်တွေထပြန်ကြတာ ကိုမြင်ရတာအလွန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေရတာ ရှက်ပါတယ်။ နောက်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာမပြောတတ်တော့ ဘူး။ အသင်းရဲ့ပစ်မှတ်ကိုလည်းမမြင်ဘူး။ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုလည်း မမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။”ဆိုပြီး ဖာဒီနန်က BT Sport စကားဝိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ “ယူနိုက်တက်ရဲ့အခုလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီး၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မှာကျောင်းတက် စာသင်တဲ့ ကလေးလေးတွေကယူနိုက်တက်အသင်းအင်္ကျီကိုငါတစ်ချိန်မှာ ဝတ်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့အဲဒီလူငယ်လေးတွေက ယူနိုက်တက်အသင်းက်ိုလည်း ကွင်းထဲမှာလာအားပေးမယ့် ပရိတ်သတ်တွေအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။”ဆိုပြီး ဖာဒီနန်ကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
နည်းပြဆိုးလ်ရှားတစ်ယောက် အသင်းမှာဒဏ်ရာပြသနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်၊ အသင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ် အောင် မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အချိန်၊ကောင်းမွန်တဲ့နည်းဗျူဟာအပြောင်းအလဲတွေ၊ အနာဂတ်အတွက် ထင်ရှားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေမခင်းကျင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဘန်လေအသင်းကတော့ ကံကောင်းပြီး လက်စတာ စီးတီး နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း တို့ကို နှစ်ပွဲဆက် အနိုင် ယူနိုင်သွားခဲ့ပါပြီ။ ယူနိုက်တက်ရဲ့မှုန်ပြာမှိုင်းဝေတဲ့အနာဂတ်အခြေအနေ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ကာဗာနီအတှကျ တနျကွေးပေါငျ ၁၂ သနျးရှိတဲ့ အငှားကမျးလှမျးမှုပွုလုပျလိုကျတဲ့ ခြဲလျဆီး
ဘနျလကေိုရှုံးတဲ့ ယူနိုကျတကျပှဲစဉျက သတိပွုမိတဲ့အခကျြမြား